Kitra – “Can 2021” Fihaonana amin’i Etiopia: hiray fo amin’ny Barea ny Malagasy antapitrisany, anio | NewsMada
Tsy misy afa-tsy resaka Barea aloha izao. Hitodika etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina avokoa ny mason’ny vahoaka malagasy, anio. Hiara-kientana amin’ny ekipam-pirenena sy hanohana hatramin’ny farany ireo maherifontsika, amin’ny fihaonana amin-dry zareo Etiopianina. Tanjona ny fandresena!
Ekena fa mbola ao anatin’ny fotoan’ny fampielezan-kevitra isika izao, saingy takona sy nangingina izany, tamin’ity herinandro ity, indrindra ho an’ny anio asabotsy. Hitodika etsy Mahamasina avokoa ny mason’ny Malagasy rehetra, amin’ity tolakandro ity. Hiray fo, amin’ny Barea, na mpitia na tsy mpitia baolina kitra, hanohana sy hankahery an-dry Abel Anicet sy ny namany, eo amin’ny fifanintsanana, hiadiana ny “Can 2021”. Fihaonana, hikatrohana amin’ny Walya Ibex-n’i Etiopia. Rariny loatra izany satria hany nahavita nampiray sy nampifankatia ny vahoaka iray manontolo ny Barea, hatreto. Vonona ny ekipa malagasy ary tapa-kevitra ny hanolotra fandresena indray tahaka ny efa vitan-dry zalahy tany Egypta, nandritra ny “Can 2019”
Hanao veloma an’i Faneva Ima
Hanan-tantara ihany koa ity lalao ity satria ho fanaovam-beloma an’i Faneva Ima, araka ny efa nambarany fa lalao farany iarahany amin’ny Barea ny hikatrohana amin’i Etiopia. Kapitenin’ny ekipam-pirenena hatramin’izay i Faneva Ima. Nahafaty baolina 14 izy nandritra ny nitondrany ny fanamian’ny Barea.
Nanampy ny ekipam-pirenena ny tenany tamin’ny fitsirihana ireo mpilalao mpila ravinahitra ary nanampy tamin’ny fitaovana. Te hivoaka amin’ny varavarana lehibe izy ka hiezaka hamono baolina, anio. Tsy hiala lavitra ny tontolon’ny kitra ny tenany fa ho eo ihany, saingy hifantoka kokoa any amin’ny kliobany. Hanampy hatrany ny mpanazatra Nicolas Dupuis sy ny federasiona, indrindra fa ny Barea, ny tenany na izany aza.
Hisokatra avokoa ny vavahady…
Tsiahivina fa tsy hisy fivarotana tapakila intsony amin’ity anio ity. Tsy azo atao ny mivarotra tapakila sandoka na amin’ny vidiny mihoa-pampana. Eo koa ny tsy fahazoana mitondra zava-maranitra sy tavoahangy ary zava-mahadomelina na zava-pisotro mahamamo. Ankoatra izany, hisokatra avokoa ireo vavahadin’i Mahamasina ka ny nidirana ihany no hivoahana rehefa mirava ny lalao. Efa misy laharana ny fipetrahan’ny mpijery eny amin’ny “gradins”.
Etsy andaniny, noraisin’ny filoha Rajoelina Andry, teny Ambohitsorohitra, ny Barea, omaly hariva. Nitsodrano ho azy ireo ny filoham-pirenena. Nanome toky ny hahazoana isa telo kosa ny mpilalao.
Tompondaka sy Synès